Home » Toerana fitsangatsanganana » Bruxelles amin'ny bisikileta: mankalaza bisikileta ny renivohitra eropeana ary manome voninahitra ny lova ara-kolontsaina
Ny 2019 dia taona tsy misy toa an'i Bruxelles. Amin'ity taona ity i Bruxelles dia mankalaza ny faha-50 taonan'ilay fandresena voalohany an'ny Tour de France an'i Eddy Merckx, mpanaingo bisikileta Belzika, ary koa ny fiatombohana (Grand Départ) ho an'ny Tour de France 2019. Fotoana tsy manam-paharoa ho an'ny renivohitra eropeana mba hankalazana ny bisikileta sy hanome voninahitra ny lova ara-kolontsaina.
Bisikileta any Bruxelles
Brussels dia mirehareha tsy latsaky ny 218km amin'ny lalan'ny bisikileta. Nahita avo roa heny ny isan'ny bisikileta tao amin'ny faritra Bruxelles-Capital nandritra ny dimy taona lasa. Ity fironana miakatra ity, izay hita hatramin'ny fiandohan'ny taonjato, dia nitohy tamin'ny fisondrotana 13% isan-taona hatramin'ny 2010.
Niova nandritra ny taona maro i Bruxelles, ary nanome toerana bebe kokoa ho an'ny bisikileta. Mbola tsy lavorary ny fotodrafitrasa, saingy mihatsara isan-taona ny raharaha. Mametraka lalan-bisikileta, mamorona fijanonana bisikileta vaovao, mampitombo ny faritra 30km / ora… efa maro ny hetsika, na ho an'ny daholobe na ny tsy miankina, hamporisihana ny mponina ao Bruxelles hidina bisikileta.
Bisikileta ho an'i Bruxelles
Miaraka amin'ny bisikileta ho an'i Bruxelles, Brussels Mobility (serivisy ho an'ny daholobe miadidy ny fitaterana manerana ny faritra Bruxelles-Capital) dia mikendry ny hametraka ireo mponin'i Bruxelles ao amin'ny lasely. Mba hanaovana izany, ny serivisy dia manohana fikambanana maro any Bruxelles izay mampiroborobo ny bisikileta eto an-drenivohitra. Sarintanin'ny fijanonana tsara, soso-kevitra momba ny zotra hitety ny tanàna soa aman-tsara na koa toerana fanamboarana bisikileta tena ilaina, ireo fikambanana ireo dia mifampiresaka amin'ireo mpitaingina bisikileta isan'andro mba hanamorana azy ireo kokoa ny bisikileta.
Brussels Tontolo iainana ho an'ny tanàna maitso
I Bruxelles dia manana velarana maitso maherin'ny 8,000 hektara, manodidina ny antsasaky ny faritra no misy azy. Manomboka amin'ny ala Sonian (Forêt de Soignes) midadasika mankany Bois de la Cambre, faritra maitso maro any Bruxelles no azon'ny bisikileta. Mba hitehirizana ireo toerana maitso ireo sy hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra eto an-drenivohitra, ny manampahefana isam-paritra Brussels Environment dia miasa mba hamorona sy hitantana ireo habaka maintso ary hitahiry ireo faritra voajanahary. Manentana ny mponina ao Bruxelles ihany koa izy mba hampiasa fomba fitaterana “malefaka” bebe kokoa, ho an'ny tanàna maitso sy kanto kokoa.
Làlan'ny boriborintany isam-paritra
Ireo no làlana izay atolotra ho an'ny dia lavitra sy lavitra. Raha fintinina dia mampiasa lalana eo an-toerana izay manana fifamoivoizana maivana kokoa izy ireo, miadana kokoa amin'ny hafaingam-pandeha ary vokatr'izany dia tsy dia miady saina noho ny lalana lehibe.
Bruxelles sy ny Tour de France
Ny Grand Départ 2019 dia hametraka an'i Bruxelles sy Belzika amin'ny lasely indray.
Ny "Great Loop" dia nahitana an'i Belzika in-47, saingy ny tantara dia tena nanomboka tao an-drenivohitra eropeana tamin'ny 1947. Nandalo an'i Bruxelles in-11 ny Tour. Ny Grand Départ dia tany no natao voalohany nandritra ny Universal Exhibition tamin'ny 1958. Tany Bruxelles ihany koa no nanaovan'i Eddy Merckx ny Yellow Jersey voalohany nataony, tany Woluwe-Saint-Pierre tamin'ny 1969, teo akaikin'ny fivarotana enta-madinika an'ny fianakaviany.
Firenena mandeha bisikileta i Belzika. Miaraka amin'ireo hazakazaka bisikileta telo mahazatra any Flanders, roa ao Ardennes ary manodidina ny kilasy kilasy 10, dia manome safidy hazakazaka ho an'ny bisikileta amateur ny firenena fisaka. Amin'ny sehatra iraisam-pirenena, laharana faharoa amin'ny firenena bisikileta i Belzika, hoy ny International Cycling Union (loharano: UCI, 29 Mey 2019).
Noho ireo antony rehetra ireo no nahatsapan'i Bruxelles hambom-po sy finaritra amin'ny Tour de France, izay nahasarika mpankafy bisikileta maro tamin'ny fametrahana ny tompon-daka ho lohalaharana.
Olona lehibe sasany
Fanontana faha-106 amin'ny Tour de France
50 taona taorian'ny nandresen'i Eddy Merckx Tour de France voalohany (1969)
Fitsingerenan'ny faha-100 taonan'ny Yellow Jersey, nitafy 111 an'i Eddy Merckx (rakitsoratra izay mbola tazoniny ankehitriny)
Isan'ny fotoana nandalovan'ny Tour tamin'i Bruxelles: 11
Ny fotoana farany nitrangan'ny Grand Départ tany Bruxelles: 1958
Tamin'ny fotoana farany nandalovan'ny Tour tany Bruxelles: 2010
Manasongadina ny Grand Départ
ALAROBIA 3 JOLY
Fanokafana ny ivon-toerana fandraisana ao amin'ny Bruxelles Expo, eo amin'ny Heysel Plateau. Handray ny mpanao gazety sy mpikarakara ny Tour of France ity, avy amin'ny ASO (Amaury Sport Organisation).
HERINANDRO 4 JOLY NY FAN PARK
Manomboka amin'ny 4 - 7 Jolay, toerana iray natokana manokana ho an'ny Tour de France no hatsangana ao amin'ny Place de Brouckère. Mandritra ny efatra andro, mandra-pahatapitry ny dingana farany an'ny Grand Départ, ny hetsika, ny lalao ary ny atrikasa dia karakarain'ny ASO sy ny mpiara-miombon'antoka Tour.
Mampahafantatra ireo ekipa
Ity dia iray tsy azo lavina iray amin'ireo fisongadinan'ny Grand Départ!
Vory vahoaka ny vahoaka hijery ny ekipa 22 misy mpihazakazaka 8, izay hampientanentana ny mpijery mandritra ny 3 herinandro. Hisy seho marobe ihany koa mandritra ity fotoana ity. Handao ny Place des Palais ireo tompon-daka ary handeha hamaky ny Royal Galleries ao Saint-Hubert mahatalanjona, hanome ny mpijery erak'izao tontolo izao fomba fijery miavaka. Ireo ekipa dia haseho ao amin'ny Grand-Place.
ZOMA 5 JOLAY
Famaranana amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Belzika amin'ny lalao Eddy Merckx. Tahaka ny fandresena voalohany an'ny Tompondakan'ny Tour de France, ity lalao kilalao malaza ity dia mankalaza ny faha-50 taonany.
SABOTSY 6 JOLY ROAD STUS BRUSSELS – CHARLEROI – BRUSSELS> 192KM
Hapetraka haingana ny feo mandritra ity dingana voalohany amin'ny Tour de France 2019 ity. Amin'ny fandaozana an'i Molenbeek Saint-Jean ary avy eo Anderlecht, dia efa nieritreritra momba ny Mur de Grammont, lalana mideza sy miolakolaka eo amin'ny 43km, izay eo amin'ny lalan'ny Tour de France voalohany nataon'i Eddy Merckx tamin'ny 1969.
Kaominin'i Bruxelles amin'ny zotra: Bruxelles, Molenbeek Saint-Jean, Ganshoren, Koekelberg,
DAHATSORATRA FIVORIANA TEAM-ALAHADY 7 JOLAY TEAMIN'NY BRUSSELS> 28KM
Ny tsy ampoizina voalohany amin'ny Tour 2019 dia efa voambara mialoha, manomboka amin'ny fanovana mpitarika ... raha toa ka tsy anisan'ny ekipa manam-pahaizana manokana ilay sprinter, izay mety haka ny takarivan'ny hariva teo aloha.
Ny arabe malalaka any Bruxelles dia hanome fotoana ireo ekipa ampy fitaovana tsara indrindra hampiseho ny herin'izy ireo, miaraka amina zorony vitsivitsy sy andian-dahatsoratra diso manandrana ny fahaizan'izy ireo ara-teknika amin'ny hery avo lenta.
Kaominin'i Bruxelles amin'ny zotra: Bruxelles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem,
Ny volan'ny bisikileta any Bruxelles
Ny mponina iray any Bruxelles izay maniry fatratra amin'ny bisikileta dia nanangana ny tahirim-bola "Bikes in Brussels" (tantanan'ny King Baudouin Foundation). Ity famatsiam-bola ity dia mikendry ny hanohana ny tetikasa ho an'ny fotodrafitrasa na fitaovana izay natomboky ny fikambanana, tompon'andraikitra na fiaraha-miasa tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana. Ireo tetik'asa ireo dia natao hamporisihana ny mpitondra bisikileta hitety ny tanàna amin'ny famaliana ny andrasan'ny mpampiasa. Ny tetikasa dia mikendry ny tetikasa kely sy salantsalany tahaka ireo mila asa sy fampiasam-bola bebe kokoa.
Bruxelles sy Eddy Merckx
Kianja Eddy Merckx: nosokafana tamin'ny 28 martsa 2019, ity kianja ao Woluwé-Saint-Pierre ity dia manome voninahitra ny tompon-daka amin'ny bisikileta teo aloha. Nihalehibe izy ary nonina tao amin'ny kaominina nandritra ny 27 taona niaraka tamin'ny ray aman-dreniny, izay nanana fivarotana enta-madinika tao. Teo ihany koa no nahazoan'i Eddy Merckx ny volony mavomavo voalohany, nandritra ny dingana Tour de France tamin'ny 1969.
The Grand-Place any Bruxelles: Tamin'ny volana jolay 1969 dia olona an'arivony no nankahery an'i Eddy Merckx teny an-davarangana tao amin'ny Hôtel de Ville, noho ny zava-bitany mahafinaritra tao amin'ny Tour de France. Ilay bisikileta dia nanao ny akanjony mavo voalohany tany Paris.
Laeken: Eddy Merckx dia nifaninana tamin'ny hazakazaka voalohany nataony tany Laeken tamin'ny 16 Jolay 1961, ary nahavita ny laharana fahenina. Ny fanontana 25 an'ny Grand Prix Eddy Merckx dia nitranga ihany koa tany Laeken, teo anelanelan'ny 1980 sy 2004. Nanomboka tamin'ny hazakazaka am-bisikileta irery ny hazakazaka fitsapana, avy eo tamin'ny ekipa roa. 42km ny halavany.
Ala: mbola amateur, Eddy dia nandresy ny Forest Omnium tamin'ny 1964 niaraka tamin'i Patrick Sercu.
Fiantsonan'ny metro Eddy Merckx ao Anderlecht: Ilay bisikileta nampiasain'ny "Cannibal" nandritra ny Hour Record-ny tamin'ny 1972 dia teo amin'ny toeran'ny lozision'ity metro ity, izay nosokafana tamin'ny 2003.
Sekolin'i Eddy Merckx: Any Woluwe-Saint-Pierre, sekoly ambaratonga faharoa io no nomena anarana ho fanomezam-boninahitra ilay mpanafika tamin'ny 1986.
Royal Sporting Club Anderlecht: mpankafy baolina kitra, Eddy Merckx dia lasa mpankafy ny klioban'ny baolina kitra Anderlecht tamin'ny alàlan'ny sakaizany, mpilalao baolina kitra belza teo aloha ary mpitantana iraisam-pirenena Paul Van Himst.
La Belle Maraîchère: Ity trano fisakafoanana hazan-dranomasina any afovoan-drenivohitra no ankafizin'ny mpanafika taloha. Mbola mandeha any tsy tapaka miaraka amin'i Paul Van Himst izy hankafy, ankoatry ny zavatra hafa, ny Prawn Croquettes matsiro.
#tourensemble: Ny ekipa faha-23 ho an'ny Grand Départ amin'ny Tour de France 2019
Mazava ho azy, ny tena manintona ny Tour de France dia ireo mpitaingina bisikileta matihanina iraisam-pirenena, izay kintan'ny Great Loop. Fa ahoana ny amin'ny bisikileta isan'andro? Ny hetsika #tourensemble dia mikendry ny hahazo mponina Bruxellel betsaka araka izay azo atao amin'ny lasely ho an'ny sy aorian'ny Grand Départ. Na mandeha bisikileta tsindraindray izy ireo, amin'ny maha-komuter, amin'ny fahafinaretana na koa somary mihambahamba aza ao an-tanàna, #tourensemble dia miara-mivory amin'ny tanjona iraisana: afaka mivezivezy manodidina ny renivohintsika, bebe kokoa, foana na foana!
#tourensemble dia mampivondrona ireo belza rehetra miaraka amin'ny zom-pirenena rehetra manome ny haren-kolontsain'ny renivohitra, manodidina ny tetikasa fiaraha-miasa iray izay manome dikany ny Tour de France sy ny Grand Départ. Io no ho teboka fanombohana ny “tetik'asa iainan'ny olom-pirenena”, izay ny bisikileta no ho lasa endrika fitaterana lehibe indrindra eto an-tanàna.
Ny tanjon'ity fampielezan-kevitra isam-paritra ity dia ny fampitomboana betsaka ny mpitaingina bisikileta any Bruxelles amin'ny fiandohan'ny Tour de France, ary ny fananana bisikileta betsaka kokoa noho ny fiara eto an-drenivohitra ny herinandron'ny Grand Départ. Tena fandraisana andraikitra ara-tsosialy, asaina hanatevin-daharana ny ekipa ny rehetra!
Tamin'ity taona ity manokana dia niasa mafy i Bruxelles. Manomboka amin'ny fampirantiana ka hatramin'ny fananganana velodrome, amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana misy lohahevitra tany am-boalohany, hetsika maro no karakaraina amin'ny toerana samihafa eto an-drenivohitra hanomezam-boninahitra an'ireo mpitondra bisikileta sy tompon-daka ankafizintsika.
Fampirantiana Jef Geys
Ilay mpanakanto belza Jef Geys (1934-2018) dia naka sary ny Tour de France voalohany, izay nandresen'i Eddy Merckx tamin'ny 1969, "nilentika tanteraka tamin'ny tontolon'ny bisikileta". Lavitry ny famirapiratana amin'ity hazakazaka ity ka hatrany amin'ny fandresena, ny fandrakofany mifanohitra amin'izany dia mifantoka indrindra amin'ny fampifangaroana ireo hadalana sy fiainana andavanandron'ny tontolo bisikileta. Anisan'ireo mpijery, bisikilety, fiara ekipa ary takela-by, isaky ny mandeha ny mpifaninana, izay mety ho Eddy Merckx mora… Pejy roa an'ny gazety belza tamin'io vanim-potoana io no nampijery ireo sary ireo Tamin'ny andro nandresen'i Eddy Merckx ny Tour dia nanohy ny diany voalohany tamin'ny volana i Neil Armstrong. Tamin'ny alalàn'ity fampirantiana ity, Jef Geys indray dia naneho ny tenany ho tompon'ny fifandraisana misy eo amin'ny Highs and Lows (ara-bakiteny, eto) izay nahatonga azy ho iray amin'ireo mpanakanto belza taorian'ny ady.
Daty: Hatramin'ny 1 septambra 2019
100 taona tamin'ny fampirantiana Yellow Jersey
Ho an'ny andiany faha-106 an'ny Tour de France, ny fampirantiana dia manome voninahitra an'ireo bisikileta 15,059 izay nanomboka ny Tour, sy ireo tompon-daka 3,228 54. 111 ireo bisikileta belza no nitafy tamim-pireharehana ny Yellow Jersey, ilay malaza indrindra Eddy Merckx, tompon'ny kodiarana roa tsy fantatra, izay nitafy XNUMX in-droa nandritra ny asany. Firaketana!
Toerana: Espace Wallonie
Daty: Hatramin'ny 14 Jolay 2019
Ny fampiratiana fitsangantsanganana
Ity fampirantiana ity dia manadihady ny tantara sy ny fivoaran'ny hetsika fanatanjahantena fahatelo lehibe indrindra manerantany, amin'ny alàlan'ny lohahevitra samihafa: ny tantara, ny fananganana ny làlana sy ny fanamby, andro iray eny an-tsehatra, ny fiara fanaovana dokambarotra, ny majika fanatanjahantena mivantana, ny Tour Festival sy ireo mpanohana azy, ny zotra sy tarehimarika Tour de France faha-105, sns.
Any Molenbeek Saint-Jean, iray amin'ireo kaomina 19 ao amin'ny faritr'i Bruxelles-Capital, dia misy ny fampirantiana ao amin'ny Raymond Goethals Stand ao amin'ny Kianja Edmond Machtens. Ity dia fanipazana vato avy amin'ny toerana tena fiaingana amin'ny dingana voalohany amin'ny Tour de France, ary ny velodrano Karreveld taloha.
Toerana: Kianja Edmond Machtens
Daty: Hatramin'ny 14 Jolay 2019 Vaovao misimisy:
Ny VELOMUSEUM dia fandraisana andraikitra avy amin'ny Archive and Museum for the Flemish monina any Bruxelles (AMVB), iaraha-miasa amin'ny orinasa ara-toekarena sosialy Cyclo sy ny tranomboky holandey Muntpunt. Mitondra anao amin'ny dia an-kalalahana mandritra ny 150 taona amin'ny kolotsaina bisikileta any Bruxelles. Dimampolo amby zato taona io, satria tamin'ny 1869 dia nampidirina tao amin'ny tanànan'i Bruxelles ny lalàna mifehy ny bisikileta voalohany.
Daty: Hatramin'ny 7 Jolay 2019
Mahita an'i Bruxelles amin'ny bisikileta
Eddy Merckx sy Bruxelles amin'ny bisikileta
Ity mitaingina ity dia mankalaza ny iray amin'ireo mpitaingina bisikileta malaza indrindra eran-tany, Eddy Merckx, mpandresy in-dimy amin'ny Tour the France. Hatramin'ny fahazazany tany Woluwe-Saint-Pierre ka hatrany amin'ny fandreseny marobe, tadiavo indray ny zava-drehetra ary mifamoivoy amin'ny dian'ny "Cannibal". Manambatra anecdotes Tour miaraka amin'ny tantara sy ny fampandrosoana ny bisikileta any Bruxelles, ity fitsidihana ity dia mametraka ny bisikileta amin'ny toerana mendri-kaja ao an-drenivohitra Belza.
Bruxelles dingana amin'ny Tour de France 2019 amin'ny bisikileta elektrika
2019: Tongasoa an'i Brussels ny Grand Départ an'ny Tour de France! Ny fotoana farany dia tamin'ny 1958. Ny Alahady 7 Jolay dia hahita fitsarana amin'ny ekipa. Nametraka tadivavarana 28km eto an-drenivohitra ny mpikarakara, mivezivezy amin'ireo làlana mahafinaritra indrindra ary miampita ireo valan-javaboary tsara indrindra. Tsy nety nanadino an'io i "Raha vao tany Bruxelles". Manoro hevitra anao izahay hitafy ny akanjo lava mavo ary ho lasa tompon-daka amin'ny bisikileta miaraka aminay. Amin'ny bisikileta misy anay, dia hanaraka ny làlana nalehan'ireo mpanafika izahay ary hahita an'i Bruxelles mandritra ny elanelam-panahy sasany. Raha nofinofisinao foana ny handray anjara amin'ny Great Loop dia ho anao ity mitaingina ity!
Fandaminana: Vantany vao tany Bruxelles
Mahita an'i Bruxelles amin'ny bisikileta isaky ny zoma sy asabotsy miaraka amin'i Cactus.
Ny fitsangatsanganan'ny faran'ny herinandro dia mitondra vondrona kely miala amin'ny lalana voadona hahitana ireo toerana sy faritra mahagaga any Bruxelles.
Miarahaba amin'ny bisikileta
Ny mpamangy dia olona eo an-toerana izay manome mpizahatany fahitana tsy mahazatra, am-boalohany ary manokana momba ny tanànany na ny manodidina azy, amin'ny fomba tsara sy mandray. Ity hevitra ity dia ohatra tonga lafatra amin'ny fironana amin'ny fizahan-tany hafa, izay mitaky fitadiavan'ny mpizahatany mitady traikefa marina kokoa. Ny sasany amin'izy ireo dia manolotra mitaingina bisikileta izay hitondra anao any amin'ny toerana tiany.
Tsy fantatrao angamba, fa ny faritra Bruxelles-Capital dia satro-boninkazo maintso izay renivohitra vitsivitsy no afaka mifaninana. Mba hampisehoana an'io, ary noho izany dia afaka manararaotra izany ny mponina Bruxelles rehetra, noforonina ny Green Promenade. Ny làlana dia manome loopotra 63km manodidina an'i Bruxelles: mitaingina tsara tarehy ahafahan'ny olona mandeha an-tongotra sy bisikileta mahita ireo valan-javaboary, faritra voajanahary ary ireo faritra voatahiry ao amin'ny faritra mahafinaritra eto amintsika. Ny Green Promenade dia mizara ho fizarana fito izay maneho ny lafiny maro amin'ny tontolon'i Bruxelles. Manarona eo anelanelan'ny 5 sy 12km, ny faritra misy azy dia mamakivaky faritra maro, na an-tanàn-dehibe, ambanivohitra, na indostrialy, mampiseho ireo faritra maitso maro any Bruxelles eny an-dalana.
Torolàlana ho an'ny fahitana an'i Bruxelles amin'ny bisikileta
Sarintany "Brussels amin'ny bisikileta"
Ity sarintany ity dia manolotra zotra misy lohahevitra 8 ho an'ireo bisikileta amin'ny sehatra rehetra. Amin'ny hafainganam-pandehananao manokana dia tadiavo i Bruxelles sy ny toetrany, ny kolontsainy ary ny haren'ny lovany.
Sarintanin'ny bisikileta any Bruxelles
Ity saritany ity dia mampiseho ny haavo, lalan'ny bisikileta (misy torolàlana), lalan'ny bisikileta natolotra, toerana azo ametrahana bisikileta, "Villo!" gara ary koa lalan'ny ala, ary manome torohevitra maro.
Usquare sy ny velodrome vaovao
Usquare dia ny fivadihan'ny tobin'ny tafika hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 ho toerana malalaka misokatra mankany amin'ny taonjato faha-21. Tsy campus izy io, fa tanàna vaovao tokoa ary misy an'izany rehetra izany: faritanin'i Bruxelles amin'ny ho avy izay mifangaro sy mavitrika, an-tanan-dehibe sy sariaka, mifototra amin'ny oniversite ary iraisam-pirenena, maharitra sy manavao.
Hatramin'ity faran'ny herinandro ity dia hanana velodrome an-kalamanjana Usquare: toerana tsy azo ihodivirana ahafahan'ny mpitaingina bisikileta manaram-po amin'ny fitiavany.